Chongqing Zhongshuge Ebe A Na-Ere Akwụkwọ - Imewe Mmewe
Ebe A Na-Ere Akwụkwọ N'ịkụnye mbara ala mara mma nke Chongqing na ụlọ ahịa akwụkwọ ahụ, okike keela ebe ndị ọbịa nwere ike ịdị ka ya na Chongqing ahụ na-atọ ụtọ mgbe ha na-agụ akwụkwọ. Enwere mpaghara ebe ọgụgụ ise dị mkpokọta, nke ọ bụla dị ka ala ịtụnanya nwere njiri dị iche. Stolọ ahịa Chongqing Zhongshuge enyela ndị na - azụ ahịa ahụmịhe ọzọ nwere mmasị na ha enweghị ike inweta site n'ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Aha oru ngo : Chongqing Zhongshuge, Aha ndị na-emepụta ya : Li Xiang, Aha onye ahịa : X+Living.
Ebe A Na-Ere Akwụkwọ Li Xiang Chongqing Zhongshuge